Degmada Godob-jiiraan oo Gole Deegaan Yeelatay – Radio Daljir
Degmada Godob-jiiraan oo Gole Deegaan Yeelatay
Febraayo 3, 2016 6:46 b 0
Arbaco, Feberaayo 03, 2016 (Daljir) —golaha deegaanka degmada Godob-jiiraan ayaa saaka cod gantaaga ku doortay gudoomiye iyo ku xigeen.
17 xubnood oo ah golaha deegaanka ee degmada ayaa hab gacantaaga ugu codeeeyey gudoomiyihii sida KMG ah u hayey degmada Yuusuf Maxamed Faarax iyo ku xigeenkiisii Axmed Maxamed Cabdi oo labaduba xilkan utaagna.
Doorashada waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne,Wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha gudaha Puntland Cali Yuusuf Cali,Xildhibaano iyo Ganacsato.
Masuuliyiinta oo goobta hadal ka jeediyey waxay kula dar daarmeen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa inay gutaan waajibaadka horyaala,islamarkaana masuuuliyad ka saaran tahay Godob-jiiraan iyo deegaanada hoostaga.
Gudoomiyaha degmada Godob-jiiraan Yuusuf Maxamed Faarax oo isna hadal jeediyey ayaa sheegay inuu la imaan dono wax qabad bulshada reer Godob-jiiraan iyo deegnada ku xeeran ay ubaahan yihiin,waxaa uuna dowladda iyo shacabka ka codsaday inay kala shaqeeyaan hormarka degmada.
Waa markii ugu horaysay oo Godob yeelato gole deegaan tan iyo sanadii 2007 markaas oo laga dhigay degmo,Xildhibaanada golaha deegaanka godob ayaa ah sida horay loo ogaa 17 xubnood,maadaama degmadu ay ku jirto degmooyinka loo yaqaan C-da,balse hada waxaa soo baxaya warar sheegaya in lagu daray labo xubnood oo dheeri ah,markii beeluhu ku mur meen hab loo qaybiyey 17ka xubnood.
Cudurka Zika oo lagu Arkay Gobolka Texas ee Maraykanka
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Arbaco_03